မာတီမီဒီယာ Archives - EPRP ၀က်ဆိုဒ်တည်ဆောက် ပြုပြင်ဖန်တီးမ
၂၁ ပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပမည့်ရက် ထပ်ရွှေ့မည်
NCA ထိုးပြီးမှ UNFC အဖွဲ့ဝင်ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် အတိုင်ပင်ခံ၊ တပ်ချုပ်တို့နှင့်တွေ့ခွင့်ရမည်ဟုဆို
မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံးတို့အား အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဟု ထုတ်ပြန်
ဤစာမျက်နှာတွင် website ၏ မာတီမီဒီယာနှင့် ဆက်စပ်သည့် အကြောင်း အရာများကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာ သို့မဟုတ် မြန်မာ ဘာသာဖြင့် ဖေါ်ပြ ထားသည်။အင်တာနက် ကော်နက်ရှင်နှေးသော အင်တာနက် အသုံးပြုသူများ အတွက်ပိုမို လွယ်ကူစေရန် မူရင်း ဗီဒီယိုဖိုင်များကို ဆိုဒ်ချုံ့ ထားကာ EPRP Myanmar Youtube channel တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဖေဖ၀ါရီလရဲ့ တတိယအပါတ် ၁၆.၀၂.၂၀၁၈ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ်
သတင်း(၁) – NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့တိုင်းရင်းသား ၁၀ ဖွဲ့ နယ်စပ်မှာတွေ့ဆုံမည့်သတင်း
သတင်း (၂) – မူတရော်(ဖာပွန်)ခရိုင် ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး ခေါင်းဆောင်သစ်များရွေးကောက် တင်မြှောက်တဲ့သတင်း
သတင်း(၃) – ပြည်သူ့ဆန္ဒကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် NCA မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကို လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်း
မေးမြန်းချက် – ပညာရေးမှာထူးချွန်ထက်မြတ်မှု့ကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ပညာသင်ယူနေပြီး (Schlarship) ရရှိတဲ့ နော်ဂျက်ဂလင်းညွန့် က ပညာရေးနဲ့ပက်သက်ပြောပြချက်တွေကို နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။…(voice)
ကောက်နှုတ်ချက် – မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး စောသောဒိုထူး က ကောက်နုတ်တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRPရဲ့ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” ဆေးရောင်ပျယ်ပန်းချီကား” ဇာတ်လမ်းရဲ့ အပိုင်း(၅)ကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
Filed Under EPRP ရေဒီယို (ကရင်)
ဖေဖော်ဝါရီလ တတိယအပါတ် ၁၅.၂.၂၀၁၈ နေ့တွင်ထုတ်လွှင့်သည်။ကြာချိန် ၁၅း၀၀ မိနစ်
News (1) တရုတ်နိုင်ငံ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် နှင့် EAOS PPWT တို့ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရုတ်သံရုံးတွင်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးတဲ့သတင်း
News (2) မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMPS) နှင့်လားဟူဒီမိုကရက်တစ် အစည်းအရုံးတို့တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (အန်စီအေ) ကိုနေပြည်တော်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့သတင်း
News (3) အန်စီအေတွင် ရခိုင်ပြည်အမျိုးသားကောင်စီ (အေအန်စီ) ပါဝင်ရန် မလွယ်တော့တဲ့သတင်း
News (4) အန်စီအေ လက်မှတ်ရေးထိုးပီးသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ၁၀ဖွဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ စတုတ္ထပတ်အတွင်း ထိုင်းနယ်စပ်တနေရာတွင် တွေ့ဆုံမည့်သတင်း
Interview : ဒေါ်နန်းငွေကြည် မှ သူမရဲ့ ငယ်စဉ်ဘ၀ပင် ဆင်ခြောက်ကောင် တံဆိပ်တိုင်းရင်းဆေးလုပ်ငန်းလုပ်လာတဲ့အကြောင်းပြောဆိုချက်
Information : သျှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းများအကြောင်း
Program : သျှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းသမိုင်း သမိုင်းဝင်ဖြစ်တဲ့ပင်လုံမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ၇၁ ကြိမ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားနှင့်လူငယ်အမြင် တို့အကြောင်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Filed Under ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေဒီယို
EPRP ရှမ်း ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၃၄)
ဖေဖော်ဝါရီလ ဒုတိယအပတ် ၉.၂.၂၀၁၈ နေ့တွင်ထုတ်လွှင့်သည်။ကြာချိန် ၁၅း၀၀ မိနစ်
News (1) ထိုင်းနိုင်ငံဗိုလ်ချုပ်ကြီး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ ၂နိုင်ငံ စစ်တပ်များခင်မင်ရင်းနှီးလာစေဖို့အတွက် နေပြည်တော်တွင်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်း
News (2) RCSS/SSA ဌာနချုပ် လွယ်တိုင်းလျှန်းတွင် သျှမ်းပြည်ညီညွတ်ရေးကော်မတီ CSSU နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကျင်းပရာ အလှည့်ကျ ဥက္ကဌအဖြစ် သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (ကျားဖြူပါတီ) အားပေးအပ်လိုက်တဲ့သတင်း
News (3) သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်တွင် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမှုကြောင့် သိန္နီမြို့သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသည့် စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်များသတင်း
News (4) (၇၁)ကြိမ်မြောက် သျှမ်းပြည်အမျိုးသားနေ့တွင် TNLA က RCSS ကို သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကျောက်မဲမြို့နယ်တွင် စစ်မျက်နှာဖွင့်လှစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်း
News (5) UNFC နှင့် PPST တို့ပထမအကြိမ် လွယ်တိုင်းလျှန်းတွင်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်း
Interview : သျှမ်းပြည်နယ် ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဆရာတော်အရှင်မဟော်သဓာမှမွေးနေ့မင်္ဂလာ ကိုမမေ့သင့်သောအရာများအကြောင်းပြောဆိုချက်
Information : Targeting . Life . Skills
Program : သျှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပင်လုံမြို့တွင် ပြုလုပ်သောသျှမ်းအမျိုးသားနေ့အခမ်းအနား အကြောင်းတို့ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊၊
EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၅၉)
ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ ဒုတိယအပါတ် ၉.၂.၂၀၁၈ တွင်ထုတ်လွှင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ်
သတင်း(၁) – KNU/KNLA-PC မှ ၎င်းတို့နယ်မြေအတွင်းရှိ ပညာရေး ထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်ရေး PEF ဖောင်ဒေးရှင်းထူထောင်တဲ့သတင်း
သတင်း (၂) – ကရင်(၃) ပါတီပူးပေါင်းပြီး ပါတီသစ်တည်ထောင်မည့်သတင်း
သတင်း(၃) – NLD အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ခရီးမပေါက်သေးဟု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွက်ဆစ်ပြောတဲ့သတင်း
မေးမြန်းချက် – သောတရှင်တွေနားဆင်ရမှာကတော့- တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အလုပ်အကိုင်၊ အတတ် ပညာပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှု့ လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ ဆရာဖြိုးဝေဇက် ကမြိုင်ကြီးငူ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲ၊ စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှု့ အကြောင်း ပြောပြတာတွေကို နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ချက်။။မြန်မာလိုပြောပါတယ်။
ကောက်နှုတ်ချက် – မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး နော်ခလားရာက ကောက်နုတ်တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRP ၏ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” ဆေးရောင်ပျယ်ပန်းချီကား” ဇာတ်လမ်းရဲ့ အပိုင်း(၄)ကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကို စစ်ပွဲတွေမရှိတာ၊ စစ်ပွဲတွေ အဆုံးသတ်တာလို့ လူအများက သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးမှာ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံပေါ် မူတည်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များစွာ ရှိပါတယ်။ အတူတကွယှဉ်တွဲနေထိုင်မှု၊ အတွင်းစိတ်သဘော တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု၊ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် အင်အားသုံးမှုများ ကင်းဝေးမှု စတာတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ အနှစ်သာရတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံဖတ်ရန်
Filed Under ကျားမ ဖြစ်တည်မှု ကျားမ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး
EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၅၈)
ဖေဖ၀ါရီလရဲ့ ပထမအပါတ် ၀၂.၀၂.၂၀၁၈ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ်
သတင်း(၁) – ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် ရှင်းပြဖို့ KNU နဲ့ KCBOs/KSCOs တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်တဲ့သတင်း
သတင်း (၂) – JMC အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး ကေအဲန်ယူ ပြုလုပ်သွားမည့်သတင်း
သတင်း(၃) – စစ်ရေးနည်းလမ်းမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းရန် ကချင်ပါတီများ တိုက်တွန်းတဲ့သတင်း
မေးမြန်းချက် – သောတရှင်တွေနားဆင်ရမှာကတော့- ကရင်ပြည်နယ် ပျားမွေးမြူရေးဋ္ဌာနမှ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးဖြစ်တဲ့ ဆရာစောကျော်ကျော်လင်း က ပျားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းနဲ့ ရရှိလာတဲ့ ပျားရည်တွေရဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မဲ့အကြောင်း ပြောပြတာတွေကို နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ချက်။။မြန်မာလိုပြောပါတယ်။
ဆွေးနွေးချက် – စောသောဒိုထူး နဲ့ နော်မူးရာ တို့က စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ တွေ့ကြုံရတာ တွေနဲ့ပက်သက်လို့ဆွေးနွေး တဲ့အကြောင်း တွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRPရဲ့ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” ဆေးရောင်ပြယ်ပန်းချီကား” ဇာတ်လမ်းရဲ့ အပိုင်း(၃)ကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
EPRP ရှမ်း ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၃၃)
ဖေဖော်ဝါရီလ ပထမအပါတ် ၂.၂.၂၀၁၈ နေ့တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ကြာချိန် ၁၅း၀၀မိနစ်
News (1) သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားရေးရာဌာန ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဒု-၀န်ကြီးနေရာအတွက် အစိုးရက ကမ်းလှမ်းလာတာကိုငြင်းပယ်လိုက်တဲ့သတင်း
News (2) ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ဒူတာတေးက လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကို ဂရုစိုက်ဖို့မလိုကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြောဆိုတဲ့သတင်း
News (3) သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS) ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွတ်ဆစ်ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ပထုမ်းထားနီး တက္ကသိုလ်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေး (M.P.A) အထူးပြုဘာသာဖြင့် မဟာဘွဲ့ဆွတ်ခူးရရှိသည့်သတင်း
News (4) သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့ SLND မှ လူငယ်စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးသင်တန်းပြုလုပ်တဲ့သတင်း
Interview : Kaw Dai Orgonization ရဲ့EC တာဝန်ခံဖြစ်သော နန်းဟန်ခမ်းမှလဲချားမြို့နယ် ၀မ်ယိမ်းသျှမ်းအမျိုးသားစာသင်ကျောင်းရှိလာခြင်းနှင့်ကျောင်းရဲ့ပညာအရည်အချင်းအကြောင်းပြောဆိုချက်
Information : ကလေးဘ၀တိုးတက်ပြောင်းလဲစေတဲ့အချက်များ
Program : တောင်ကြီးမြို့သျှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုခန်းမတွင် ကျင်းပသွားသော Tai History Seminar အကြောင်းတို့ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၅၇)
ဇန်န၀ါရီလ နောက်ဆုံးအပါတ် ၂၆.၀၁.၂၀၁၈ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ်
သတင်း(၁) – KNU နယ်မြေရှိ ကရင်စာသင်ကျောင်းများအတွက် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုအရေးတကြီး လိုအပ်နေတဲ့သတင်း
သတင်း (၂) – မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) နှင့်လားဟူဒီမိုကရက်တစ် အစည်းအရုံး (LDU) တို့အပစ်ရပ်လက်မှတ် ရေးထိုးမည့်သတင်း
သတင်း(၃) – NCA လက်မှတ်ထိုးရန် အဆိုပြုထားတဲ့ ၈ချက်ဆက်ဆွေးနွေးမယ်လို့ UNFC ကြေညာတဲ့သတင်း
မေးမြန်းချက် – သောတရှင်တွေနားဆင်ရမှာကတော့- ဆရာစောအယ်ဒိုက အခုလက်ရှိ ကရင်ပြည်ရဲ့လက်ရှိတိုးတက်မှု့တွေ၊ စီးပွါးရေးတိုးတက်လာမှု့အခြေအနေ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ လူငယ်တွေအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင် သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောပြ တာတွေကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ချက်။။မြန်မာလိုပြောပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRP ရဲ့ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” ဆေးရောင်ပျယ်ပန်းချီကား” ဇာတ်လမ်းရဲ့ အပိုင်း(၂) ကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
EPRP ရှမ်း ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၃၂)
ဇန်န၀ါရီလ နောက်ဆုံးအပါတ် ၂၆.၁.၂၀၁၈ နေ့တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ကြာချိန် (၁၅း၀၀)မိနစ်
News (1) သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့တွင်ပြုလုပ်သွားသော သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD အစည်းအဝေးတွင် ကြားဖြတ်ရွှေးကောက်ပွဲ ၂နေရာဝင်ပြိုင်မည့်သတင်း
News (2) သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲခရိုင် မိုင်းငေါ့မြို့နယ်တွင် အစိုးရတပ်မတော်နှင့်သျှမ်းပြည်တပ်မတော်(RCSS/SSA) တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့သတင်း
News (3) မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP) နှင့်လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး (LDU)တို့အနေဖြင့် မကြာခင်NCA စာချုပ်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးမည့်သတင်း
News (4) တတိယအကြိမ်မြောက် ၂၁ ရာစုပင်လုံအစည်းအဝေးကိုရပ်ဆိုင်းမည့်သတင်း
News (5) CUUS ဥက္ကဌ ရာထူးလက်ခံမည့်ကျားဖြူပါတီ ဥက္ကဌနှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးတက်ရောက်မည်မဟုတ်ဟုပြောဆိုတဲ့သတင်း
Interview : နန်းနွမ်းမို ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုမှ အစိုးရထံပညရေးကျောင်း (၂၀)ကျောင်းကိုရှမ်းတိုင်းရင်းသားစာပေသင်ကြားခွင့်ပေးရန်ပြောဆိုချက်
Information : သျှမ်းအမျိုးသားနေ့သမိုင်း
Program : Shan Youth Network မှသျှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းသီပေါမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ၈ ကြိမ်မြောက် အင်္ဂလိမ်စကားပြောသင်တန်း အကြောင်းတို့ကိုနားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၅၆)
ဇန်န၀ါရီလ တတိယအပါတ် ၁၉.၀၁.၂၀၁၈ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ်
သတင်း(၁) – သံသယစိတ်များကြောင့် NCA အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ထင်သလောက်မလွယ်ဟု ဗိုလ်ချုပ်စော အိုင်းဇက်ဖိုး ပြောတဲ့သတင်း
သတင်း (၂)- ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကက်သလစ်ဂိုဏ်းအုပ် ဆရာတော်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ ဆွေးနွေးတဲ့သတင်း
သတင်း(၃) – ၂၁ရာစုပင်လုံဆက်လက်ကျင်းပနိုင်ရေး အလေးအနက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ PNLO ထုတ်ပြန် တဲ့သတင်း
မေးမြန်းချက် – သောတရှင်တွေနားဆင်ရမှာကတော့- (NAG) (Network Adipati Group) ရဲ့ သင်တန်းပေးနေတဲ့ဆရာတာခဲ(Field Facilitator) က အမျိုးသမီးတွေကို ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးတွေကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ သင်တန်းများပေးနေုတဲ့ အကြောင်း ပြောပြတာတွေကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRP ရဲ့ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” ဆေးရောင်ပျယ်ပန်းချီကား” ဇာတ်လမ်းရဲ့ အပိုင်း(၁)ကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖေ‌ဖျောဝါရီ 16, 2018 EPRP
ဖေ‌ဖျောဝါရီ 16, 2018 RFA (Photo byစိုင်းစိန်လူ)